Haddii aad tahay qof bilow ah ama aad ka sii horumarsan tahay Ganacsiga, waxaan halkan kugu siinayaa Sirta ah Ichimoku Cloud si aad ugu qabato Suuqa Kala Iibsiga.
Magacaygu waa Philippe, waxaan ahay ganacsade xirfadlayaal ah, oo aad u xiiseeya Suuqa Kala iibsiga in ka badan 15 sano, Khabiir ku ah Range Trading iyo nidaamka Ichimoku Kinko Hyo. Waxaan halkaan u joogi doonaa inaan kugu hagto A ilaa Z hawshan xiisaha leh.
Aan aragno waxa ku saabsan isla markiiba.
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa:
- Aasaaska Ganacsiga: laga soo bilaabo wadarta helitaanka dhaqanka ilaa sharaxaadda laambadaha Japan, nusqaamaha, aragtida Dow iwm ...
- Fur akoon demo ah oo aad qaabeyso Platform-kaaga
- Sharaxaad Fudud oo Farsamaysan oo Maareynta Lacagta ah
- Ugu dambeyntiina waa habka Range Trading oo aan ku siiyo sirta daruurta Ichimoku
Dooro inaad ku bilowdo xiisahaan xiisaha leh hab fudud, faa'iido leh oo amaan ah.
Maalin Ganacsi Kumo-Range Habka Ganacsi- Forex, Sarrifka Suuqa Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Si hufan uga bilow 5 euro (1/3)
horeMaalgashiga bilowga: laga bilaabo A ilaa Z
socdaAbuur sumaddaada iyo alaabadaada daqiiqado [MVB]
Caafimaadka shaqada: maxaa isbeddelaya laga bilaabo Maarso 31, 2022